Erdogan oo qorshe dalka lagu xasilinayo soo bandhigaya - BBC News Somali
Image caption Shacabka dalkaasi ayaa u hiiliyay Erdogan iyo dowladdiisa xilligii uu inqilaabka dhacayay.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa maanta la filayaa in uu soo bandhigo qorshe uu doonayo in uu dalka ku xasiliyo marka uu kulan deg deg ah la yeesho golahiisa amniga. Tan iyo markii uu fashilmay inqilaab milatari oo la doonayay in dowladdiisa lagu rido ayaa waxaa la soo qab-qabtay ama shaqada laga saarayba 50 kun oo qof oo isugu jiro laamaha ammaanka, iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda.
Turkey ayaa ka doonaya mareykanka in uu u soo gacan geliyo wadaadka lagu magaacaabo Gulen, arrintaasi oo madaxweyne Erdogan iyo dhiggiisa mareykanka Barack Obama ay taleefoon uga wada hadleen. Ilaa hadda 45,000 oo qof ayaa laga dhigay kuwo la qabqabtay, la eryey ama shaqada ay ka joojisay xukuumadda Turkiga tan iyo wixii ka dambeeyey afgambigii dhicisoobay ee todobaadkii hore.
Welina waxaa sii kordhaya dadka loo arko inaysan daacadda u ahayn madaxweyne Racep Tayyip Erdogan, waxaana iminka lagu daray macallimiinta jaamacadaha iyo hormuudyada iyo warbaahinta. Xukuumaddu waxay sheegaysaa in uu afgambiga soo maleegay wadaadka fadhigiisu yahay Maraykanka ee Fethullah Gulen oo isagu beeniyey eedeyntaas.
Turkigu wuxuu ku cadaadinayaa Maraykanka inay u soo dhoofiyaan wadaadka, arrintaasna waxaa la iskula soo qaaday wada hadal telefoonka ku dhex maray talaadadii labada madaxweyne, Obama iyo Erdogan. Afhayeenka aqalka cad, Josh Ernest wuxuu sheegay in go’aanka ah in wadaadka la dhoofiyo iyo in kale uu ku salaysnaan doono heshiiska labada waddan u yaalla.
Aqalka gaashaandhigga ee pentagon ayaa isna sheegay in sidoo kale ay wadahadallo dhex mareen talaadadii xoghayaha difaaca ee Maraykanka Ash Carter iyo dhigiisa Turkiga,kuwaasoo ku saabsanaa arrinta saldhigga ciidanka circa ee Incirlik oo ku yaalla koofurta Turkiga. Saldhigga oo ay xulafada Maraykanku hogaaminayo u isticmaalaan weerarrada ay ku qaadaan kooxda dawladda islaamiga ee Ciraaq iyo Suuriya ayaa koronto la’aan ahaa tan iyo markii inqilaabka la isku dayey.
Sidaasoo ay tahayna xukuumadda turkigu waxay sii wadda inay ganac adag u adeegsato dadka ay u aragto inaysan la dhacsanayn.
Hay’adda nidaamisa warbaahinta turkiga ayaa Iyana ruqsadda kala noqotay 24 idaacado iyo TVyo isugu jira, kuwaasoo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin Mr. Gulen. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa ayadoo QM iyo beesha caalamka ay turkiga ugu baaqayaan inuu kor yeelo isku xukunka sharciga iyo xuquuqul insaanka